Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. फर्केर हेर्दा – Emountain TV
काठमाडौँ, १ बैशाख । माहोल नयाँ वर्षको छ । सर्वसाधारणदेखि सेलिब्रिटीसम्म शुभकामना आदानप्रदान गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरू रंगिएका छन् । व्यक्तिगत उपलब्धिको हिसाबले वर्ष २०७४ कस्तो रहयो त  ?
नयाँ एल्बम सकाएँ
मेरो दोस्रो एल्बम ‘आधार २’ को काम सकियो । रेकर्डिङ, मिक्सिङ भ्याइसकेँ । यो नै मेरा लागि २०७४ को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहयो । एल्बममा सात गीत छन् । फोक पपमा बेस्ड भएर मैले विभिन्न विधालाई छुन खोजेकी छु । नयाँ सालको तीन महिनाभित्र एल्बम बजारमा आइसक्छ । ‘वुमेन इन कन्सर्ट’ टुरमा अमेरिका गएर त्यहाँका पाँच सहरमा कार्यक्रम गरियो । महिला सशक्तीकरणका लागि भएकाले मिनिमम कस्टमै कार्यक्रम गरेँ । त्यसमा भाग लिन पाउनुलाई पनि ठूलो कुरा मानेकी छु ।
दुई नाटक, चार फिल्म
धेरै उल्लेखनीय काम गरेँजस्तो त लाग्दैन । दुइटा नाटक बनाएँ, चारवटा फिल्म खेलेँ । ‘घामपानी’, ‘लुट’, ‘मिस्टर झोले’, ‘कान्छी’ लगायत फिल्म रिलिज भए । यीमध्ये कुनैमा खुब मिहिनेत गरिएको थियो, बहुत ध्यान दिएर काम गर्दा पनि त्यसअनुसारको आउटकम आएन । कहिलेकाहीँ यस्तै हुँदो रहेछ । त्यसैले यसपालिका मेरा सबै फिल्म औसत थिए, कुनै बेस्ट भएन । समग्रमा ०७४ साल सामान्य रहयो । सम्झनलायक काम केही गरेनछु, कि बिर्सिए ?
जिम जान थालेँ
इन्जिनियरिङमा मास्टर्स ज्वाइन गरेँ । फिल्महरू धेरै खेलिनँ, अलि चुजी बनेँ यसपालि । अर्को सालचाहिँ फ्लेक्जिबल बन्ने योजना छ । असारमा ‘धनपति’ रिलिज भएको थियो । मेरो कामको सराहना भयो । सबैले राम्रो रेस्पोन्स गरेकाले धेरै खुसी भएकी थिएँ । त्यसपछि फिल्मको अफर निकै आए । ‘भैरे’ र ‘चंगा चैट’ छानेँ । कामकै सिलसिलामा मुस्ताङ पुगें, त्यति नजिकैबाट कहिल्यै हिमाल देखेको थिइनँ । स्थानीय कला, संस्कृति बुझ्न पाएँ । वि सं २०७४ ले हेल्थ कन्सस पनि बनायो । जिम जान थालेकी छु ।
‘न्यानो माया’ बाँडेँ
आशिष राना (लाउरे), गायक
गएको जाडो महिनामा घरघरमा गएर लुगाहरू उठाएँ । अनि, सडकका बालबालिकालाई दिएँ । ‘न्यानो माया’ शीर्षकमा थालिएको त्यो काम पोखरामै सीमित भए पनि केही गर्न सकेको महसुस भएको थियो । यो नै वि सं २०७४ को मेरो बेस्ट काम हो । साथै, पोखरामा नयाँ र्‍यापर भाइहरूलाई प्रोडयुस गरेँ । आयुश, प्रवीण, रेजनहरूले राम्रो गरिरहेका छन् । मेरो आफ्नै म्युजिक भिडियो ‘सुपर रागा ’ पनि निकै चल्यो । पाँच महिनामा युटयुबमा ५३ लाख भ्युज पुग्ने यो नै पहिलो नेपाली र्‍याप गीत हो ।
सामाजिक विषयमा कलम चलाएँ
कुमारी लामा, लेखक
दुई महिनामा एकचोटि हुँदै आएको ‘आहवान संवाद’ कार्यक्रममार्फत साहित्यिक सक्रियता जारी राखेँ । ‘आत्मलेखनमा इमानदारी’, ‘हिमाल आरोहणमा जान लागेका पाँच युवतीका कथा’ जस्ता विषयले बहस सिर्जना गरे । यो हाम्रो लागि उल्लेखनीय कुरा हो । यसपालि विविध सामाजिक विषयमा कलम चलाएँ । तेस्रोलिंगी समुदायबारेको ‘महिला पुरुषभन्दा पर’, छाउपडीजस्ता कुप्रथाविरुद्धको ‘रातो आतंक’ र अपांगताको विषयमा ‘एक पाटो समाज’ जस्ता सिर्जना मेरा बेस्ट काम थिए । कान्तिपुरबाट
बोर्ड अध्यक्षका लागि शिव श्रेष्ठको नाम चर्चामा
जस्टिन विवर र हेलेबीच सुटुक्क इङगेजमेन्ट